China Eco Baby Wipe mpanamboatra sy mpamatsy | Haicheng
Fitarihan-kevitra: Baby Wipe dia fomba fanasan-damba malalaka sy tsy misy eco - izay misy fotsiny ny votoatin'ny hoditra manalefaka sy ny lamba vita amin'ny landihazo malefaka tsy misy akora simika ary tsy misy fahasosorana sy fahasimbana amin'ny hoditra marefo ny zaza, voasedra, tsy misy zavamiaina bitika. Ny orinasan-tsika dia afaka manamboatra famafana zazakely arakaraka ny zavatra takian'ny mpanjifa OEM, habe samihafa, famaritana samihafa, endrika samihafa. Ohatra: 20pcs 30pcs 40pcs 50pcs 60pcs 80pcs 100pcs. Ny solo-jaza novokarina tao amin'ny orinasa nampiasainay dia tsy mampiasa lamba landihazo, malefaka sy malefaka, fakana zavamaniry fotsiny, tsy misy akora simika, ny fizotry ny famokarana ao amin'ny atrikasa madio madio 100, 000. famokarana mandeha ho azy tanteraka, fandotoana - fahombiazana maimaimpoana sy avo lenta. Hamarino fa azo antoka sy madio ara-pahasalamana ireo solo-jaza vokarina. Ny solo-jaza dia azo ampiasaina hanadiovana ny tanan'ny zaza, vava, hoditra, vodiny, tavoahangy ary kojakoja an-jaza, nefa koa hiantohana ny fahasalaman'ny zaza. Manana fanaraha-maso hentitra momba ny vokatra zazakely izahay, amin'ny alàlan'ny fanandramana atrikasa sy fanandramana laboratoara indroa, manomboka amin'ny sandan'ny PH ka hatramin'ny fitiliana mikraoba, hahazoana ny hatsarana. Aza avela hiala amin'ny ozinina ireo vokatra tsy mendrika, hiantohana ny kalitaon'ny vokatra. Ny fisafidianana fonosana sy ny takiana amin'ny solo-jaza dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny fenitra iraisampirenena, ary taorian'ny 17 taona dia nahazo ny mari-pahaizana famokarana solo-jaza isika ary nandalo ny fanamarinana ny vokatra sy ny fanandramana antoko fahatelo an'ny andrimpanjakana iraisam-pirenena. Manana ekipa orinasa mpivarotra varotra ivelany matihanina izahay ary mpitantana fahazoan-dàlana manokana hanadio ny fadin-tseranana, mba hahazoana antoka fa mifanaraka amin'ny lalàna nasionaly sy ny lalàna iraisam-pirenena, ny fahazoan-dàlana malaky, ny fitaterana haingana ary ny fidirana soa aman-tsara any amin'ny trano fitobian'ny mpanjifa. Ny orinasan-tsika koa dia manana ekipa matihanina aorian'ny - varotra, 24 ora hamahana ny manaraka - olana amin'ny varotra ho an'ny mpanjifa, ny mpanjifa dia Andriamanitra, satria ho an'ny tenany ny mpanjifa. Ny vokatray dia aondrana any Japon, Hong Kong, Azia atsimo atsinanana, Eoropa ary toerana hafa, ary mahafinaritra ny miara-miasa amin'ireo mpanjifantsika nasionaly. Ny orinasan-tsika dia mitaky ny fametrahana ny vokatra namboarina, dia ny fandoavana ny petra-bola, ny fandaminana ny fifandanjana miaraka amin'ny faktioran'ny entana rehefa mandefa, izay afaka miantoka ny tombotsoan'ny zon'ny roa tonta.
1 Eco Baby Wipe 20 pcs / kitapo 5bag / boaty, boaty 20 / baoritra, 1100cases / 40 HQ
2 Eco Baby Wipe 30 pcs / kitapo 5bag / boaty, boaty 20 / baoritra, 850cases / 40 HQ
3 Eco Baby Wipe 40 pcs / kitapo 50bags / carton, 1700cases / 40 HQ
4 Eco Baby Wipe 50 pcs / kitapo 40bags / carton, 1750cases / 40 HQ
5 Eco Baby Wipe 60 pcs / kitapo 30bags / carton, 1800cases / 40 HQ
6 Eco Baby Wipe 80pcs / kitapo 25bags / carton, 1700cases / 40 HQ
7 Eco Baby Wipe 100 pcs / kitapo 20bags / carton, 1500cases / 40 HQ
8 Eco Baby Wipe 100 pcs / siny 20buckets / carton, 1350cases / 40 HQ
Fampiharana fampiharana: Fanadiovana ny tanana sy ny vava amin'ny zazakely, ny fanadiovana ny hoditry ny zaza, ny fanadiovana ny vodin-jaza, ny fanadiovana tavoahangin-jaza.
Sava lalana Fanomezana ho an'ny orinasa manokana logo OEM zaza maro-asa tsy misy fanampiny pcs isan-karazany Eco Baby Wipe manadio tsy misy tanana ny tanana sy ny vava, ny fanadiovana ny hoditry ny zaza, ny fanadiovana ny vodin-jaza, ny fanadiovana tavoahangin-jaza.
Description Baby Wipe
asa Lahatsoratra momba ny zazakely
TECHNOLOGY tenona tsotra, tenona perila，volovolo
Fampiasana Sokafy ny tombo-kase wipe lena, fafao ny vavan-jaza sy ny lahatsoratra an-jaza, fanadiovan-jaza
Votoatin'ny singa mavitrika Vitamina E Spunlace lamba tsy tenona
OEM / ODM：azo ekena
Teo aloha: Famafana fanadiovana
Manaraka: Delay Gel Ho an'ny Lehilahy